Sunday September 09, 2018 - 11:28:06 in Wararka by Super Admin
Go'aan shalay ay magaalada Kismaayo ku gaareen hoggaamiyaasha maamul goboleedyada shanta ah ayaa khilaaf hor leh ka dhax dhaliyay isla madaxda maamulladaasi.
Cameey iyo Carrabeey
Ku xigeenka Cabdi Wali Gaas ayaa ku dhawaaqay in uu kasoo horjeedo go'aankii magaalada Kismaayo ee ka dhanka ahaa dowladda Federaalka wuxuuna ku tilmaamay wax aan sharci aheyn!.
Cabdi Xakiim Cameey oo wareysi siinayay Mid kamida idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay Cabdi Wali Gaas uusan metelin maamulka Puntland isagoo eedeyn kulul ujeediyay madaxda maamul goboleedyada.
"Kuma raacsani go’aanka Kismaayo, mana la igala tashan, dowlad hal qof ma ahan, waa saddex hey’adood is ilaaliya oo wada shaqeeya, go’aanada masiiriga ah waxay u taallaa Golaha Xukuumadda ayaa go’aan ka gaaraya, waa adag tahay in qof uu go’aan qaato, sharcigana ma waafaqsana”ayuu yiri Cameey.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka 'Puntland' ayaa madaxda maamullada Kismaayo ku shiray ku eedeeyay in wixii fashil ah ay dusha uga tuureen dowladda Federaalka islamarkaana ay qudhoodu fashilanyihiin qaato, sharcigana ma waafaqsana”ayuu yiri C/xakiin Camey.
"Qodobka Amniga oo kale eedeymo Madaxda maamulada leeyihiin bey dowladda Federaalka rabaan inay saaraan oo ay ku camcamiyaan, maamul goboleed asiga ka mas’uul ah amniga deegaanada uu ka mas’uulka yahay, ma ahan in dowladda Federaalka ay dusha ka saaraan”ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cameey.
Dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka maamulka isku magacaabay 'Galmudug' ayaa ku dhawaaqay in uusan waafaqsanayn go'aankii Kismaayo.
Max'med Xaashi Carrabeey ayaa warbaahinta u sheegay in Galmudug aysan xiriirka ujarin dowladda Farmaajo "xilligaan lajoogo in xiriirka loo jaro Federaalka waa qalad, hal shakhi ma metetelo karo dowlad goboleed" ayuu yiri Carrabeey.
Ku xigeennada Gaas iyo Xaaf ayaa aad ugu dhow Farmaajo iyo Kheyre waana tan keentay in hoggaamiyaashii ku shiray Kismaayo ay dowladda Federaalka ku eedeeyaan in ay burburin ku heyso maamullada aan iyada ku fikirka aheyn.
Dagaal Ciidamo Kawada tirsan DF Ku dhaxmaray Xaafado katirsan magaalada Muqdisho.